तराई विपत्‌को प्रायश्चित गर
यो विनाशलीला प्रकृतिको कारण भएको थिएन । यो भ्रष्टाचारको परिणाम हो, जो सत्ता–राजनीतिको आडमा मौलाएको छ । संक्रमणकालीन राजनीतिमा अल्झिएको राज्यसत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा अडिएको स्थानीय निकायको बिल्कुलै महत्वमा परेन– मधेशमा आजको विपत्ति निम्त्याउने त्यो विनाशकारी कृत्य ।
संसद् जोगाउन कानून बनाऊ
डा. केसीका जनपक्षीय माग पूरा गर्न सरकार, व्यवस्थापिका–संसद्, राजनीतिक दल सबै किन अकर्मण्य देखिए ? राजनीतिक तप्काबाट प्रदर्शित यो विघ्न निर्लज्ज उदासीनताको कारण नखोज्दासम्म हाम्रो लोकतन्त्र सीमित वर्गको स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र बनिरहनेमा शंका छैन ।
बूढीगण्डकी अघि बढाऊ
जुनसुकै बहानामा होस्, यसको विपरीत उभिंदा विषम भूराजनीतिक बदलावका बीच ऊर्जामा परनिर्भरता बाहेक अर्को उपलब्धि हासिल हुँदैन । बूढीगण्डकीमा सर्वदलीय–सर्वपक्षीय सहमति र यथासम्भव छिटो निर्माण आजको आवश्यकता हो ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षामा लूट चलेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको आड पाएका सीमित व्यक्तिहरूबाट मच्चाइएको यो लूटले चिकित्सा शिक्षामा आम नागरिकको पहुँचलाई दूर बनाएको छ ।
संवैधानिक अधिकार र दायित्व वहनको ‘स्टार्टिङ लाइन’ मा उभिएका स्थानीय तहहरू ‘रेस’ मा त्यो बेला मात्र दौडिन सक्छन्, जब केन्द्रको अह्रनखटनमा रहेको स्रोतसाधन समयमै स्थानीय तहमा उपलब्ध हुन्छ।
मधेशको अलमल सुल्झाउने जिम्मा एमालेको काँधमा (सम्पादकीय)
मुलुकलाई निकास दिन सरकार असफल भएको बेला प्रतिपक्षको अझ बढी भूमिका अपेक्षित हुन्छ, जुनअहिले एमालेबाट गरिएको छ ।
मधेश आन्दोलनः सहज अवतरण गराऊ (सम्पादकीय)
सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको यो भूगोलका २६ लाख ६४ हजार मतदाताले आउँदो २ असोजमा मात्र आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्नेछन् । यो ढिलाइमा केही मधेशकेन्द्रित दलहरूको एकीकरणबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) कारक देखियो ।
नेपाली राजनीतिको आजको यथार्थ भनेको स्थानीय तह निर्वाचन हो। राजपाले बुझनुपर्छ– यथार्थभन्दा परको राजनीतिको भविष्य छैन।
चुनावी सुरक्षा प्रभावकारी बनाऊ
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी भइसकेको बताइरहँदा देशका विभिन्न भागमा भएका विस्फोटका घटनाले समग्र सुरक्षा स्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यही परिस्थिति कायम रहे निर्वाचनमा खस्ने मत प्रतिशत प्रभावित हुने खतरा छ ।
प्रथम चरणको चुनावी परिणामका कारण प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा जसरी पनि जित्ने राजनीतिक आक्रामकता बढ्दो छ, राजपा र नेकपालाई समेत माथ गर्ने गरी । जसले हिंसालाई अवश्यंभावी बनाउँदैछ ।
प्रदेश–२ लाई संकटतर्फ नधकेल (सम्पादकीय)
प्रदेश–२ मा निर्वाचन अनिश्चितता बढाएर सरकारले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूखण्ड राजकीय रुपमा बेलगाम बन्ने खतरा बढाएको छ।
सत्पात्र बन्ने मौका
२०१७ सालमा खोसिएको प्रजातन्त्र फर्काउने आन्दोलनबाट उदाएका शेरबहादुर देउवाको राजनीतिको पूर्वार्द्ध जति निष्ठापूर्ण रह्यो, त्यसको ठीक विपरीत भयो शासनकाल । शासकीय शक्ति आर्जनमा सफल र लोकतान्त्रिक राजनीतिको विस्तारमा असफल नेता मानिए, उनी ।